Portable Mobile Prefab Container House pamwe Bathroom (Container Home) - China Qingdao Xinmao ZT Steel
Portable Mobile Prefab Container House pamwe Bathroom ...
Portable Mobile Prefab Container House pamwe Bathroom (Container Home)
Description: Modular inotakurika mudziyo imba yakagadzirirwa maererano nokurondedzerwa kuti kutumirwa mudziyo chaizvo. It chakagadzirwa prefab chiedza simbi sezvo pepuranga uye sandwichkuva emadziro kuti madziro uye denga, ipapo akwanise pamwe pamahwindo, nemikova, flooring, sirin'i, uye zvimwe mamwe nenhumbi. Vari yakanyatsoiswa nesimba chiedza uye kunogona accessorized huenderane yenyu zvinodiwa. Cabinet Unit chivako pakatanga simbi uye C ...
Modular inotakurika mudziyo imba yakagadzirirwa maererano nokurondedzerwa kuti kutumirwa mudziyo chaizvo. It chakagadzirwa prefab chiedza simbi sezvo pepuranga uye sandwichkuva emadziro kuti madziro uye denga, ipapo akwanise pamwe pamahwindo, nemikova, flooring, sirin'i, uye zvimwe mamwe nenhumbi. Vari yakanyatsoiswa nesimba chiedza uye kunogona accessorized huenderane yenyu zvinodiwa. Cabinet Unit chivako pakatanga simbi uye chando-kuumbwa simbi welded pamwe kuti mureza zvinoriumba. The imba inogona akagadzirirwa sezvinoita chete chikwata chimwe kana zvakabatana chose kubva mabhokisi akawanda, nedzimba nyore kubatana kwakadaro kukurova. Saka zviri nyore uye kutsanya kuti iiswe uye disassembled.
Chirongwa ichi chakanga kutsvaka muSpain. Zviri pakati gomo uye nyanza, kure kure ruzha guta. Zviri panofanira 49 kutumirwa mugaba. The ano magadzirirwo anoita imba anotarira kwezvokufuka uye vakasununguka kurarama. Haveing ​​zororo anofanira kuva unodziya chaizvo uye kuzorora.
Ichi kuresitorendi. Unogona kunge kofi uye kuva kwako kudya pano.
20FT / 40FT Modular Portable Container House Magadzirirwo
External kukura 6058mm (L) * 2438mm (W) * 2591mm (H) / 12116mm (L) * 2438mm (W) * 2591mm (H)
House pakona Prefabricated chiedza simbi
Roof Panel Rock Wool / EPS sangweji Panel (maererano mutengi chinodiwa)
Panel Rock Wool / EPS sangweji Panel (maererano mutengi chinodiwa)
Ground garo Prefabricated chiedza simbi
hwindo PVC zvishoma nezvishoma mumatope mahwindo kana aruminiyamu chiwanikwa hwindo kana mupurasitiki simbi hwindo
musuo Streel Sandwich Panel kana musuo sandwichkuva remadziro aruminiyamu pepuranga.
nhema Ceiling PVC siringi
Electricity sys 2 zviedza & 1 chinja
Opsioneel zvishongedzo Furniture wedzimba mupenyu, hofisi, dhomitari, Toilet, Kitchen, Bathroom, Shower, etc.
kunyoresa Kurarama imba, hofisi, dhomitari, carport, chitoro, dumba, kiosk, misangano mumba, kandini, etc.
Customized divi akafadza.
(1) Taungana vachizvitakudza neyokufambisa
One 40FT HC mutoro 2 nemhando akaunganidza mudziyo imba dimension- 5850mm * 2250mm * 2500mm
(2) Flat-rongedza chokufambisa:
Plan A: One 20FT GP mutoro 4 nemhando 20 tsoka mudziyo dzimba
Plan B: One 40FT HC mutoro 8 anogadza 20 tsoka mudziyo imba kana 4 nemhando 40 tsoka mudziyo imba.
Ukomba All vanodzivirirwa pe firimu, uye simbi mamiriro yakavhiringidzwa pamwe dzakarukwa negwarada. Accessories achaiswa pamu bepa bhokisi kana mapepa akasungirwa. Windows uye masuo zvichabviswa pamu bhokisi emapuranga.
Qingdao Xinmao ZT Steel Construction Co., Ltd kambani mumwe zvakanaka yakasimbiswa kambani ruzivo uye unyanzvi hwakasiyana mu mukugadzira prefab mudzimba siyana uye mudziyo nedzimba hwakanaka uye zvemakwikwi mutengo. Umbwa mugore 2003. anopfuura 50 R & D tsvimbo uye vashandi vanopfuura 400 kutitsigira kuwana guru musika mugove. Kambani yedu aita munyika yepamusoro rugwaro ISO9001 uye Steel Structure Construction Qualification Certificate Grade II.
Pachivande Container Houses
20 FT Modified Shipping Container House Chezvivi ...
Flat Pack 20FT Container House pamwe Kitchen, Wa ...
Smart Prefabricated Mobile Shipping Container H ...
Prefab Prefab Flat Pack Container House kuti Ind ...